ပရိတ်တွေ အကြား အကြီးအကျယ် စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်နေကြတဲ့ “လမ်းဘေး ကော်ဖီ သောက်ချင်တယ်” ဆိုတဲ့ အနုပညာ ရှင်များ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပရိတ်တွေ အကြား အကြီးအကျယ် စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်နေကြတဲ့ “လမ်းဘေး ကော်ဖီ သောက်ချင်တယ်” ဆိုတဲ့ အနုပညာ ရှင်များ
ပရိတ်တွေ အကြား အကြီးအကျယ် စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်နေကြတဲ့ “လမ်းဘေး ကော်ဖီ သောက်ချင်တယ်” ဆိုတဲ့ အနုပညာ ရှင်များ
သီချင်းတစ်ပုဒ်၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ ပွဲတော်တစ်ခု အသစ် အဆန်း ရှိရင် အနုပညာ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အသီးသီးဝန်းရံအားပေးကြတာ တကယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့အထလေး တစ်ခုပါပဲ။ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အတွက် ဝန်းရံအားပေးကြသလို ဂီတလောကသား တွေကလည်း သီချင်းတစ်ပုဒ်၊ အယ်လ်ဘမ် တစ်ခွေအတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဝန်းရံပေးကြတာ ပရိသတ်ကြီးလည်း မြင်ဖူးကြုံ ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မှာတော့ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ သဘင် နယ်ပယ် အသီးသီးက အနုပညာရှင် တွေက ပရိသတ်တွေကို စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုတိုးအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ နေတိုး၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ ရဲလေး၊ ထွန်းထွန်း၊ ဖြိုးလေး၊ ဝါဆိုမိုးဦး၊ ကိုပေါက်၊ ဟန်ဇာမိုးဝင်း၊ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း၊ မေနွယ်ထွန်းစတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာ အသီးသီးမှာ “လမ်းဘေးကော်ဖီ သောက်ချင်တယ်..” ဆိုပြီး အသီးသီး Status တွေ တင်ခဲ့ကြ တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ အနုပညာရှင်တွေက ကြီးကြီးမားမား တစ်စုံတစ်ခု အတွက် အရိပ်အမြွတ် ပေးနေတာလား? တခြား ဘာကိုဆိုလိုချင်လဲ? ဆိုတာကို အသည်းအသန် စိတ်ဝင်စားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း “လမ်းဘေးကော်ဖီ သောက်ချင်တယ်..” တာ ဘာများဖြစ်မလဲ ခန့်မှန်းပြောပြခဲ့ပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီ းအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္၊ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၊ ပြဲေတာ္တစ္ခု အသစ္ အဆန္း ရွိရင္ အႏုပညာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြက တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အသီးသီးဝန္းရံအားေပးၾကတာ တကယ့္ကို ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အေလ့အထေလး တစ္ခုပါပဲ။ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားေတြကလည္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ အတြက္ ဝန္းရံအားေပးၾကသလို ဂီတေလာကသား ေတြကလည္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္၊ အယ္လ္ဘမ္ တစ္ေခြအတြက္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ဝန္းရံေပးၾကတာ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ျမင္ဖူးႀကဳံ ဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ မွာေတာ့ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ သဘင္ နယ္ပယ္ အသီးသီးက အႏုပညာရွင္ ေတြက ပရိသတ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားစရာတစ္ခုတိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပန္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနတိုး၊ မင္းေမာ္ကြန္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဗိုလ္၊ ရဲေလး၊ ထြန္းထြန္း၊ ၿဖိဳးေလး၊ ဝါဆိုမိုးဦး၊ ကိုေပါက္၊ ဟန္ဇာမိုးဝင္း၊ တင္ေမာင္ဆန္းမင္းဝင္း၊ ေမႏြယ္ထြန္းစတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ အသီးသီးမွာ “လမ္းေဘးေကာ္ဖီ ေသာက္ခ်င္တယ္..” ဆိုၿပီး အသီးသီး Status ေတြ တင္ခဲ့ၾက တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြကေတာ့ အႏုပညာရွင္ေတြက ႀကီးႀကီးမားမား တစ္စုံတစ္ခု အတြက္ အရိပ္အႁမြတ္ ေပးေနတာလား? တျခား ဘာကိုဆိုလိုခ်င္လဲ? ဆိုတာကို အသည္းအသန္ စိတ္ဝင္စားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း “လမ္းေဘးေကာ္ဖီ ေသာက္ခ်င္တယ္..” တာ ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ ခန႔္မွန္းေျပာျပခဲ့ပါဦးေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီ းအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous post အိမ်ယာ ထက် က ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေ နဲ့ ဆက်ဆီ ကျနေ တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးများ
Next post ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှ တရားတွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ကိုရင်ခုန်သံ တွေမြန်အောင် ဖမ်းစား လိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ် စုမြတ်ဖူး